‘प्रकाश,विना र दीपेशको उक्साहटमा मलाई कारवाही गरियो’ – YesKathmandu.com
बिहीबार ०२, भदौ २०७३
सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य हो भन्न सक्नुपर्दछ भन्ने मान्यता र धारमा हुर्किएको मान्छे हुँ । वैद्य माओवादीको अखिल क्रान्तिकारीबाट पम्फा भुसालको निकै ठूलो अनुरोधपछि एकतामा बाध्य भएर जानु परेको हो । पाएको जिम्मेदारीमा टेकेर केही गर्नसक्छु भन्ने लागेको थियो तर त्यस्तो रहेनछ ।
प्रज्ञा भवनभित्र प्रचण्डसँग अविर लगाउनुभन्दा पूर्व मैले फेरि एकपटक भनेकि हुँ– प्लिज मेरो टंग स्लिप हुन्छ, म जादैन, म अधिकारकर्मी पनि हुँ । गलतलाई गलत भन्ने चलन छ । त्यो सीमा म नाघिहाल्छु । त्यहाँभित्र जानुको मतलव सहि कुरा बोल्ने अनुमति हुनपर्छ । सबैले तपाईलाई बोल्ने अधिकार हुनेछ भने । अनि सोचे । त्यसो भए ठिकै छ नि त भनियो, अनि गइयो ।
प्रज्ञा भवनमा प्रचण्डको हातबाट अबीर लगाए । घरमा गएर प्रचण्ड पुत्र प्रकाशको वहुविवाहको विरुद्ध स्टाटस राखे । प्रकाशले गरेको वहु विवाहप्रति मेरो रोष बाँकी नै थियो । त्यही विचार पोखेकै कारण मलाई संघटनबाट गलहत्याइयो । यसरी मलाई गलहत्याउनेको नाम किटेर भन्न सक्छु । एक, दुई र तिनमा प्रकाश दाहाल, दीपेश पुन र वीना मगर हुन् ।
यस्का केही कारणहरु छन,मैले केही समय अगाडि उपराष्ट्रपति पुत्र दीपेश पुनले सिके रावतलाई गोली हान्दिन्थे भन्ने स्टाटस पढे । ‘सिके रावतजस्ता मान्छे जन्माउने तिम्रै बुबा त हुन नि’ भन्ने आसयको लेखे । त्यो लेख भाइरल भएर दीपेशको कानसम्म पुगेछ । अनि त्यसको रिस स्वरुप हो यो कार्वाही ।
प्रकाश र वीनाको त मैले मात्र के सबैले विरोध गरैकै थिए । म संगठनभित्र आउँदा टार्गेटमा परे । तुरुन्त निकाल, आजै निकाल भने । संगठनमा सचिवलगायतका केही साथीहरु होइन यस्तो गर्नुहुन्न भनेर भन्दै थिए तर पावरको अगाडि के चल्छ र !
तर,सामान्य संगठनको नियममा स्पष्टीकरण लिने पद्धति हुन्छ । पद्धति नै नभएको ठाउँमा छिरेपछि, के दुख के सुख । दुख त त्यस्तो प्रणालीले कारवाही गरिदो रहेछ । त्यहि देखियो ।
नेताज्यू स्वाइन फ्लुले भेट्ला ?
स्थानीय निर्वाचनका कारण झापामा रोपाईं गर्न ढिलाई
ओली सरकार ढलेको उपलक्ष्यमा गोपाल किरातीको भव्य ‘चियापार्टी’
मंगलबारको शक्तिशाली भूकम्पले २० जनाको मृत्यु, करिव ८ सय घाइते
नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य भानु ढकाल विरुद्ध ज्यानमुद्धाको उजुरी